स्याटेलाईटबाट नेपाललाई तत्काल के फाईदा हुन्छ ?  HamroKatha
स्याटेलाईटबाट नेपाललाई तत्काल के फाईदा हुन्छ ?
‘नेपस्याट –१’ नाम दिईएको यो स्याटेलाइट निर्माणका लागि सरकारले नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान नाष्ट मार्फत क्युटेकलाई १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छ ।
हाम्रो कथा २०७५ माघ ११ गते १६:००
नेपालले ‘बर्डस’ कार्यक्रम अन्तर्गत जापान स्थित क्यूसु इन्स्ट्च्यिूट अफ टेक्नोलोजी (क्यूटेक) संगको सहकार्यमा आगामी अप्रिलको तेस्रो सातासम्ममा सुक्ष्म भू–उपग्रह उडाउन लागिएको हो । मे महिनाको अन्तिममा स्पेश स्टेशनबाट भू-उपग्रहलाई पृथ्वीको कक्षमा छाडिने छ । यो नेपालमा १० मिनेटसम्म रहने छ । यो भू-उपग्रहमा नेपालको झण्डा सहित नाष्टको लोगो अंकित हुनेछ ।
‘नेपस्याट –१’ नाम दिईएको यो स्याटेलाइट निर्माणका लागि सरकारले नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान नाष्ट मार्फत क्युटेकलाई १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छ । अहिले क्युटेकमा स्याटेलाइटको तथ्याङक संकलनका लागि चाहिने ग्राउण्ड स्टेशन सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठिको तयारीको काम भईरहेको छ । यसले भू-उपग्रहले पठाएको तथ्याङकहरुको विश्लेषण र संकलनको काम गर्छ । यो स्टेशन नाष्टको कार्यालय परिसरमा निर्माण हुनेछ ।
नाष्टका प्रविधि संकाय प्रमुख रबिन्द्र प्रसाद ढकालले बताउनुभयो, “स्याटेलाइटबाट हाम्रा सहरहरु कसरी बिस्तार हुदैं छन्, कत्तिको बिस्तार हुदैछ भन्ने थाहा हुन्छ I यसले सहरी विकास (अर्बन प्लानिंग) मा निकै सहायता गर्नेछ I त्यस्तै, हिमालको स्तर कस्तो छ ?, हिमतालहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको विवरण प्राप्ति हुन्छ I”
१० क्युबिक सेन्टिमिटर घनाकार क्यूबोइड आकारको उक्त स्टालाइट ‘नानो स्याटेलाईट’ हो । छोटो समय र कम लागतमा तयार गर्न सकिने भएकाले कुनै पनि देशको पहिलो भू-उपग्रहको प्राथमिकतामा ‘नानो स्याटेलाईट’ पर्ने दाबी गरिएको छ । प्रक्षेपणका बेला समेत जोखिम कम हुने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
तर ‘मेगा स्याटेलाइट’ बनाउन भने करिब एक अर्ब खर्च लाग्छ । निर्माण समय पनि धेरै लाग्छ । नेपालले यसप्रकारको भू-उपग्रह अबको चार बर्ष भित्रमा बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
‘बर्डस ३’ युनेस्कोले भू उपग्रह नभएका मुलुकहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो । सन् २०१९ मा नेपालको नेपस्याट १ का साथै श्रीलंकाको राभना १ र जापानको उगिसू भू उपग्रह पनि प्रक्षेपण गरिदैछ ।
यसअघि अफ्रिका घाना सेनेगल, नाइजेरिया, मंगोलिया मलेशिया, थाइलैण्ड, बंगलादेश , फिलिपिन्स र भुटानले यस प्रकारको भू-उपग्रह प्रक्षेपण गरीसकेका छन ।